Musangano Wakazeya Zimbabwe neChipiri muWashington Wotaurwa Zvikuru
Nhengo dzekomiti yedare reSeneti muAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Seneta Jeff Flake naSeneta Cory Booker
Kunyange hazvo zvakabuda pachena kuti hurumende yeAmerica haisi kuzokasika kutsukunyuka panyaya yematanho ayakatorera Zimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mumusangano wekuzeya remangwana reZimbabwe wakaitwa nemusi Chipiri mudare reseneti remuAmerica waikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvinoti zvakafadzwa zvikuru nezvakabuda mumusangano uyu.
Mumwe wevakapinda mumusangano, Doctor Nobert Mugwagwa, vanove sachigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, reZimbabwe Diaspora Network North America.
Doctor Mugwagwa vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance, uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party, VaTendai Biti, vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishaikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Mashoko aDoctor Mugwagwa aya anotsinhirwawo naVaGolden Makusha, vanovewo zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avo vanotiwo mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yaVaRobert Mugabe.
VaMakusha vanoti hurumende itsva iyi inofanirwa kutanga nekugadzirisa kutambura kuri kuita vanhu muZimbabwe nekuda kwekushaikwa kwemabasa, mari nezvimwe
VaMakusha vanoti hurumende itsva iyi inofanirwa kutanga nekugadzirisa kutambura kuri kuita vanhu muZimbabwe nekuda kwekushaikwa kwemabasa, mari nezvimwe zvakawanda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu, Muzvare Savanna Madamombe, vanotiwo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose, uye hazvifanirwi kusiiwa shure.
Vachitaurawo mushure mekupa humbowo hwavo, VaBiti vanoti rwendo rwavo harwuna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete, asi kuti vakakokwa kuti vazivise mamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanoti vari kutorawo mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza, kukundikana kwayo yozotorerwa matanho.
VaBiti vanoti chikuru chavari kuparidza mavari kuita misangano ndechekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, dzisina mutauro, uye kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika, zvipuwe mukana wekuvhota.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi, uye vari mutevedzeri vemutungamiri weMDC-T, VaNelson Chamisa, vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo, uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Komiti yekongiresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yaVaMnangagwa yakananga gwara ripi.
Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchi nemukaka inogona kubara michero nekukasika?.